नेकपा खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अन्योल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरी अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानी घोषणा भएको ३० महिना पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण सुुरु हुन सकेको छैन । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपाले तोकेको राजधानी पार्टी अलग भएपछि कार्यान्वयन हुनेमा अन्यौलता छाएको छ ।
२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो । तर, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको ३० महिनासम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ, न त एउटा बोर्ड नै राखिएको छ । दुईतिहाइले राजधानी पास गर्ने दल नै अहिले विभाजित छ । यस कारण पनि अब राजधानी नै गोदावरीमा बन्दैन कि भन्नेमा पनि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । गोदावरी राजधानी तोकिएसँगै निकै उत्साहित भएका स्थानीवासी भने अहिले निराश छन् ।
अत्तरिया उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले राजधानी तोकिएका बेला भएको उत्साह अहिले निराशमा परिणत गरेको बताए । ‘आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी तोकियो निकै उत्साहित थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले ३० महिनासम्म फर्केर हेरेन । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने किन निर्णय मात्रै गर्नुपर्‍यो र !’ दुईतिहाइले पास गरेको निर्णय अब पार्टी नै अलग भइसकेकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले राजधानी बन्ला भन्ने आश मारिसकेका छौँ,’ उनले निराशा प्रकट गरे ।
गोदावरी राजधानी तोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र समर्थन भएका थिए । प्रतिपक्षी दलको विरोधका बिच बहुमतले पास गरेको राजधानी निर्माण गर्न थप अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासी निराश भएका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा चाँडै प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा गर्दा खुशी भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा यहाँका नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास झन् घटेको छ । अत्तरियाका शिवराज भट्ट पनि राजधानी निर्माणको काम चाँडो सुुरु हुनुपर्ने बताउँछन् ।
संसदमै राजधानीको विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशका जनताको सुझावभन्दा फरक किसिमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दावी गरेको छ । विरोधका बाबजुद पनि एकलौटी रुपले गरेको निर्णयको फल अहिले देखिएको कांग्रेसको तर्क छ ।
प्रदेशसभाले राजधानीका लागि स्थान तोक्दा प्रतिपक्षले भने बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए । रावलले सो क्षेत्रमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त नै नभएको बताए । ‘जंगल मासेर किन राजधानी बनाउनुपर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धनगढीमै राजधानी बनाए हुन्न ? मन्त्रालय राख्न धनगढीमा के समस्या छ त ?’ कांग्रेसले सुरुमै विरोध गरेको कारण अहिले देखिएको नेता रावलले तर्क गरे । उनले भने ‘अब राजधानी बन्ने सम्भावना निकै कम भयो ।’
अहिलेको राजनीतिक विवादले राजधानीमा कुनै प्रभाव नपर्ने सत्तारुढ दलको दावी गरेको छ । विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण राजधानीको संरचना निर्माण नभए पनि अब चाँडै निर्माण सुुरु हुने सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।